နောက်ဆုံးသောကာလနှင့်ဆိုင်သောနိမိတ်များ-ခေတ်နှင့်အညီအကျယ်ချဲ့ထားသည်။ | Signs of the End - Updated and Expanded | Real Conversion
ဇန်နာဝါရီလ ( ၃ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်မှထွက်ကြွတော်မူသည်ရှိသော်၊ တပည့်တော် တို့သည် ဗိမာန်တော်၏တိုက်ဆောင်များကိုပြခြင်းငှါ အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ ယေရှုကလည်း၊ ဤအရာအလုံးစုံကို သင်တို့သည် မြင်ကြသည်မဟုတ်လော။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ မဖြိုမချဘဲကျောက် တစ်ခုပေါ်မှာ တခုမျှမတည်မနေရဟု မိန့်တေ်ာမူ၏။ ထို့နောက် သံလွင် တောင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူစဉ်၊ တပည့်တော်တို့သည် အခြားသူမပါဘဲ၊ ချဉ်းကပ်၍၊ ထိုအမှုအရာတို့သည် အဘယ်ကာလမှဖြစ်မည်ကို၄င်း၊ ကိုယ်တော်သည်ကြွလာ၍ ဤကပ်ကမ္ဘာကုန်သောပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်ကို၄င်း အမိန့်ရှိတော်မူပါဟု လျှောက်ကြ၏။" ( (မဿဲ ၂၄း ၁- ၃ ) )
ဤနေရာတွင် သင်၏ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို "တောင်းပေါ်ဒေသ နာ" ဟုလည်း ခေါ်ဆိုသည်။ ခရစ်တော်က သံလွင်တော်ပေါ်တွင်ပေးသည့် တရားဒေသနာ လည်းဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်က တပည့်တော်များအား ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်သည်ဖျက်ဆီး ခံရမည်အကြောင်း မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ သူတို့က "အဘယ်အချိန်တွင် ဖြစ်ပျက်မည်နည်း" ဟု မေးကြသည်။ ထိုမေးခွန်းအဖြေကို မဿဲ ၂၄ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ခရစ်တော်က ထိုအကြောင်းကို အဖြေပေးထားပြီး ထိုအဖြေကို ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင် ထားပါသည်။
"သူတို့သည် ထားဘေးဖြင့် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ အ ခြားသောပြည်အရပ်ရပ်သို့ဘမ်းသွားကြလိမ့်မည်။တပါးအမျိုးသား တို့သည် မိမိအချိန်ကာလမပြည့်စုံမှီတိုင်အောင် ယေရုရှလင်မြို့ကို ခြေဖြင့် နင်းကြလိမ့်မည်။" ( (လုကာ ၂၁း ၂၄ ) )
"သူတို့သည် ထားဘေးဖြင့် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။" ဤသည်မှာ ရောမဗိုလ်ချုပ် တိတုအားဖြင့် အေဒီ ရ၀ တွင် ဖြစ်ပျက်မည့် ယေရုရှလင်၏အခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သော ပရောဖက်ပြုချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ခရစ်တော်ကြိုတင်ဟောကြားတော်မူသည်အ တိုင်း နှစ်ပေါင်း ၄၀ အကြာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် "အခြားသောပြည်အရပ်ရပ်သို့ ဘမ်းဆီးခြင်းကို ခံရကြသည်။" ဒေါက်တာ Henry M. Morris က "ဤမှတ်သားဖွယ်ရာပရော ဖက်ပြုချက်ကို နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အေဒီ ၁၃၅ တွင် ပြည့်စုံလာခြင်းမတိုင်မှီ ရာစုနှစ်တစ်ခုလုံး ကို ခန့်မှန်းပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။" ယေရုရှလင်မြို့ကို ဟတ်ဒလင်းစစ်တပ်က အေဒီ ၁၃၅ တွင် လုံးဝဖျက်ဆီးလိုက်သောအခါ ယုဒလူမျိုးများသည် အခြားပြည်အရပ်ရပ်တို့ပျံ့နှံ့သွား ခဲ့ကြသည်။ (Henry M. Morris, Ph.D., ခုခံကာကွယ်သူတို့၏ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း၊ World Publishers, ၁၉၉၅၊ စာ- ၁၁၂၂၊ လုကာ ၂၁း ၂၀၊ ၂၄ မှတ်စု )
ထို့ကြောင့် ယေရှုက "အဘယ်အချိန်နာရီတွင် ဖြစ်ပျက်မည်နည်း" ဟူသော ၄င်းတို့၏ မေးမြန်းချက်ကို ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ဗိမာန်တော်သည် အေဒီ ရ၀ တွင် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက် လိမ့်မည်။ ယုဒလူမျိုးများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော အခြားသောပြည်အရပ်ရပ်သို့ အေဒီ ၁၃၅ တွင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ကြသည်။
သူတို့က ဒုတိယမေးခွန်းဖြစ်သည့် "ကိုယ်တော်ကြွလာ၍ ဤကပ်ကမ္ဘာကုန်သော ပုပ္ပ နိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်နည်း" ဟူသောမေးခွန်းကို မေးမြန်းကြပြန်သည်။ "ကပ် ကမ္ဘာ" ဟူသောဘာသာပြန်ဆိုချက်၏ ဂရိစကားလုံးမှာ "aion" ဖြစ်ပြီး "ခေတ်ကာလ"၊ ကျွနု်ပ် တို့အသက်ရှင်နေထိုင်သည့် "ခေတ်ကာလ"၊ ခရစ်ယာန်ခေတ်ကာလ၊ ဤခေတ်ကာလပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခေတ်ကာလ၏နောက်ဆုံးသောအချိန်တွင် အသက်ရှင်နေကြသည်ဟု ထင်မိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် နောက်ဆုံးသောကာလ ခေတ်ကာလကုန်ဆုံးသည့် အချိန်ကာလ တွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်ကို သိကြရသည်။
နောက်ဆုံးကာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်ပါတ်သက်ပြီး မှားယွင်းမှုသုံးခုကို တွေ့ရ သည်။ ပထမမှားယွင်းမှုမှာ နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နေ့ရက်ကို သတ်မှတ်သည့် လူတစ်ယောက်ကို တွေ့လျှင် သူတို့သည် မှားယွင်းသူများဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ခရစ်တော် က ဤသို့ဆိုသည်။
"ထိုအချိန်နာရီကိုကား၊ ခမည်းတော်မှတပါး အဘယ်သူမျှမသိ။ ကောင်းကင်တမန်များမသိ။ သားတော်လည်းမသိ။ ထိုအချိန်ကာ လသည် အဘယ်အခါ၌ရောက်မည်ကို သင်တို့မသိသောကြောင့်၊ သတိပြု၍ ဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလော့။"( (မာကု ၁၃း ၃၂၊ ၃၃) )
ဒုတိယမှားယွင်းမှုတစ်ခုမှာ နိမိတ်လက္ခဏာအားလုံးကို အတိတ်တွင် ပြန်ပို့ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ ဤသည်ကို "သဘာဝတရားယုံသူများ" ဟု ခေါ်သည်။ ခေတ်သစ် ကယ်လ်ဗင်းယုံသူ များက ထိုအရာကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အားလုံးလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ မဿဲ ၂၄း ၁၄ ကို ဖတ်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို ဖတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် မှားယွင်းသည်ကို သိရပါလိမ့် မည်။ နိမိတ်လက္ခဏာသည် အတိတ်ဖြစ်သည့် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်သမိုင်းအစတွင် ဖြစ် ပျက်ခဲ့လျှင် ဤအပိုဒ် ၁၄ သည် မှားယွင်းလျက်ရှိပေမည်။
"လူမျိုးအပေါင်းတို့အား သက်သေဖြစ်မည်အကြောင်း၊ နိူင်ငံတော် နှင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကို လောကီနိူင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတို့၌ ဟောရလိမ့်မည်။ သို့ပြီးမှ အဆုံးသည် ဖြစ်လတံ့။"( (မဿဲ၂၄း ၁၄) )
တပည့်တော်များသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ရောမအင်ပါယာတစ်ခုလုံးတွင် နှံ့နှံ့စပ်စပ်ဟောပြော ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် "လူမျိုးတိုင်းအား သက်သေဖြစ်နိူင်ဖို့ လူမျိုးတကာတို့ကို" ဧဝံဂေလိတ ရားဟောပြောနိူင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ သူတို့သည် အမေရိကန် တောင်မြောက်၊ ဂျပန်၊ သြစသြယား၊ ပင်လယ်ကျွန်းဆွယ်များ၊ နှင့်အခြားနေရာများတွင် ဟောပြောနိူင်ခြင်းမရှိကြပါ။ သူတို့သည် "လူမျိုးတိုင်းအား သက်သေဖြစ်နိူင်ဖို့ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်" ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောနိူင် ခြင်းမရှိကြပါ။ ထိုအချက်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏အချိန်ကာလတွင် ပြည့်စုံလာခဲ့သည်။ "ထို့နောက် အဆုံးသည် ရောက်လိမ့်မည်။" ဧဝံဂေလိတရားကို ယခုအချိန်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကျဲပျံ့ နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လောက၏အစွန်အဖျားတွင်ရှိသောလူများသည် ကျွနု်ပ်၏တရား ဒေသနာကို အင်တာနက်အားဖြင့် ဘာသာစကား ၃၃ ခုတွင် ဖတ်ရှုနိူင်ကြပါသည်။ ရေဒီယို၊ လေလှိုင်း၊ သာသနာပြုများ၊ အားဖြင့် ဤပရောဖက်ပြုချက်သည် ယခုအခါ ပြည့်စုံလျက်ရှိပါ သည်။ "ထို့နောက် အဆုံးသည် ရောက်လိမ့်မည်။" သဘာဝကိုသာယုံသူများသည် မှားယွင်း လျက်ရှိကြပါသည်။ .
တတိယမှားယွင်းချက်မှာ ဤပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးကို အနာဂတ်ဖြစ်သည့် ဘေး ဒဏ်ကြီးကာလခုနှစ်နှစ်ဆီသို့ တွန်းပို့ လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ကာလပိုင်းခြားသူများ က ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် အရေးကြီးဆုံးသော နိမိတ်များကို အနာ ဂတ် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဆီသို့ပို့ခြင်းအားဖြင့် ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ ခရစ်တော်က အရိပ်သ ဘောအဖြင့် နောဧ၏နေ့ရက်ကို သာဓကအဖြစ်ပေးထားပါသည်။ သူက "လူသားသည် ကြွလာ သောအခါ နောဧလက်ထက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်" (မဿဲ ၂၄း ၃၇ ) ဟု မိန့်တော်မူ သည်။ သင်က "နောဧ၏လက်ထက်သည်" ဘေးဒဏ်ကြီးကာလခုနှစ်နှစ်ထက် ပိုမိုရှည်ကြာ သည်ကို သိရှိရန် ဓမ္မပညာရှင်ကြီးဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက နောဧ၏ခေတ်ကာလ သည် နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကြာမြင့်တော်မူကြောင်းကို သွန်သင်ထားပါသည်။ (ကမ္ဘာ ၆း ၃ ) နောဧ သည် တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကို ကြိုတင်သတိပေးထားခဲ့သည်။ (ယုဒ ၁၄၊ ၁၅ ) လောက ကြီးသည် ၁၈ရာစု ( ၁၇၃၀-၁၇၉၀ ) တွင် နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလဆီသို့ စတင်ရွေ့ လျားနေသည်ဟု သိရသည်။ နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ပေါ်ထွန်းလာမည့်မှားယွင်းသောသြ ၀ါဒများသည်လည်း သမ္မာကျမ်းစာကို ဝေဖန်မှုများ၊ ဖင်နိစိမ်၊ ဒါ၀င်ဝါဒများနှင့်အတူ ဆယ့်ကိုး ရာစုတွင် အရှိန်မြှင့်တင်ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထို့အပြင် နောက်ဆုံးသောကာလနှင့်သက်ဆိုင် သောနိမိတ်များသည်လည်း ပထမကမ္ဘာစစ်ကတည်းကစတင်ပြီး ပိုမိုထင်ရှားသိသာလာပါ သည်။
ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီး၏နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလသည် ကျွနု်ပ်တို့အား "ရုတ်တ ရက်" ဖြစ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်။ စာတန်၏လုပ်ဆောင်မှုများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ ဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိသည်။ ယခုအချိန်သည်သာ တကမ္ဘာလုံးကို မှားယွင်းသောသြဝါဒများနှင့်လောကကြီး ၏နည်းစနစ်များထဲသို့ ဖျက်ဆီးမည့်အရာကို လောင်းထည့်ဖျက်ဆီးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်လျက် နေပါသည်။ Leonard Ravenhill က "ဤသည်မှာ နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်" ဟု ဆို သည်။
တပည့်တော်များက ခရစ်တော်ပြန်လာမည့်အချိန်နှင့်သက်ဆိုင်သောနိမိတ်တစ်ခုကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က များစွာသောနိမိတ်ကိုပေးခဲ့လေသည်။ ကျွနု်ပ် က အတန်းအစားသုံးခုတွင် ခရစ်တော်နှင့်သူ၏တမန်တော်များအားဖြင့် ပေးထားသည့် နိမိတ် များစွာကို တင်ပြထားပါမည်။
၁။	ပထမအချက်၊ အသင်းတော်များ၌ရှိသောနိမိတ်လက္ခဏာများ
ထိုအရာမှာ မဿဲ ၂၄း ၄- ၅ တွင် ယေရှုက ပထမဆုံးပေးထားသည့် နိမိတ်ပင်ဖြစ်ပါ သည်။
" ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့ကို အဘယ်သူမျှမလှည့်ဖြားစေခြင်းငှါ သတိပြုကြလော့။ အများသောသူတို့က၊ ငါသည် ခရစ်တော်ဖြစ်၏ ဟုဆိုလျက်၊ ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်၍ ပေါ်လာသဖြင့် လူအများ တို့ကို လှည့်ဖြားကြလိမ့်မည်။" ( (မဿဲ ၂၄း ၄- ၅ ) )
ဤအချက်က ခရစ်တော်ဟု မိမိကိုယ်ကို သရုပ်ဆောင်ထားသည့် နတ်ဆိုးများကို ဦးစွာဖော်ပြ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက "ငါတို့မဟောမပြောဖူးသောယေရှုတပါး" အ ကြောင်းကို သတိပေးထားခဲ့ပါသည်။ ( ၂ကော ၁၁း ၄ ) တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဤသို့ဆို ထားပါသည်။
" ၀ိညာဉ်သည် အတိအလင်း ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကား၊ နောင် ကာလ၌ သြတ္တပ္ပစိတ်တွင် သံပူနှင့်ခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင်၊ မုသာစ ကားကိုပြောတတ်သောသူတို့၏ လျှို့ဝှက်ခြင်းအားဖြင့်၊ လူအချို့ တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍၊ လှည့်ဖြားတတ်သောစိတ်ဝိ ညာဉ်တို့၌၄င်း၊ နတ်ဘုရားတို့နှင့်စပ်ဆိုင်သော သြဝါဒတို့၌၄င်း မှီဝဲ ဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်။" ( ၁ တိ ၄း ၁-၂ ) )
ယနေ့ခေတ်တွင် အသင်းတော်များစွာ၌ အယောင်ဆောင်များက တရားဟောပြောနေ ကြပါသည်။ ခရစ်တော်ပုံဆောင်မှုများသည် ၀ိညာဉ်ဖြစ်တော်မူပြီး စစ်မှန်သောအသွေးအသား ဖြင့်ရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲ သမ္မာကျမ်းစာထဲက ခရစ်တော်မွေးဖွါးစေသောသူလည်းမဟုတ်ပါ။ သမ္မာ ကျမ်းစာက "လူ့ဇာတိအားဖြင့်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကို ၀န်မခံသောဝိညာဉ်မည်သည် ကား၊ ဘုရားသခင်နှင့်မစပ်ဆိုင်" ဟုဆိုသည်။ ( ၁ယော ၄း ၃) ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ခြင်းအား လုံးကြားတွင် ကေဂျေဗီကသာလျှင် ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို မှန်ကန်စွာဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ ဂရိ စကားလုံးမှာ "eleluthota" ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ဖြစ်ပြီးကာလဖြစ်ပြီး ခရစ်တော်၏မျက်မှောက် အခြေအနေကို ဆိုလိုသည်။ (Jamieson, Fausset and Brown). ကေဂျေဗီက မှန်ကန်စွာဘာ သာပြန်ဆိုထားသောကြောင့် ခရစ်တော်သည် "လူ့ဇာတိဖြင့်ကြွဆင်းလာသည်။" သူသည် လူ့ ဇာတိဖြင့်ကြွဆင်းလာပြီး ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်တည်ရှိသည်။ ခန္ဓာဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး သွေးအ သားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သူသည် သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးနောက်တွင် ယေရှုက "တစ္ဆေ သည် ဤကဲ့သို့မပြည့်စုံ" (လုကာ ၂၄း ၃၉ ) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ပင်လျှင် ထမြောက်သောကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် ရှိနေလိမ့်မည်။ သမ္မာကျမ်းစာက "ယေရှုခရစ်သည် မနေ့၊ ယနေ့၊ နောင်ကာလ အစဉ်အမြဲမပြောင်းမလဲနေတော်မူ၏" ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ဟေဗြဲ ၁၃း ၈ ) ထို့ကြောင့် ယနေ့ကာလတွင် ၀ိညာဉ်ခရစ်တော်များသည် နတ်ဆိုးများသာဖြင့်ပါသည်။ (၁တိ ၄း ၁) ကျွနု်ပ်တို့နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များစွာတွင်လည်း လူများစွာတို့က ခရစ်တော်သည် ၀ိညာဉ်ဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် စစ်မှန်သောခရစ်တော် ထက် နတ်ဆိုးကို မိုမိုယုံကြည်ကြပါသည်။ ဒေါက်တာ Michael Horton က ခရစ်တော်မပါ သောခရစ်ယာန်ဘာသာ အမည်ရှိ ၄င်း၏စာအုပ်ထဲတွင် ၀ိညာဉ်ဖြင့်တည်သောခရစ်တော် အ ကြေင်း ကို ပြောဆိုထားသည်။ (Baker Books, ၂၀၀၈) ထိုစာအုပ်ကို ၀ယ်ယူဖတ်ရှုလိုက်ပါ။
ခရစ်တော်က တဖန် ဤသို့ဆိုသည်။
" အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်၏အယောင်ကို ဆောင်သောသူနှင့် မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည် ပေါ်လာ၍ ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုပင် လှည့်ဖြားနိူင်လျှင် လှည့်ဖြားလောက်အောင် ကြီးစွာသော နိမိတ် လက္ခဏာ၊အံ့ဘွယ်သော အမှုတို့ကို ပြုကြလိမ့်မည်။ " ( မဿဲ ၂၄း ၂၄ ) )
" အကြောင်းမူကား၊ နောင်ကာလ၌ လူတို့သည် စင်ကြယ်သောသြ ၀ါဒကိုနာမခံနိူင်ဘဲ၊ ယားတတ်သောနားရှိလျှင်၊ မိမိတပ်မက်ခြင်း အတိုင်း များပြားသောဆရာတို့နောက်သို့ လိုက်ကြလိမ့်မည်။သ မ္မာတရားကိုနားမထောင်ဘဲ၊ ဒဏ္ဍာရီစကားကိုနားထောင်၍ လွဲ သွားကြလိမ့်မည်။ "( ၂ တိ ၄း ၃- ၄ ) )
ကျွနု်ပ်တို့သည် တမန်တော် ရှင်ပေါလုက ၂ သက် ၂း ၃ တွင် ကြိုတင်ပြောဆိုထားသည့် "ဖောက်ပြန်ခြင်း" တည်းဟူသော မှားယွင်းသောအယူဝါဒ၏အစောပိုင်းကာလတွင် အသက်ရှင် နေကြသည်ဟု ထင်မိသည်။
" မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။ " ( မဿဲ ၂၄း ၁၂ ) )
ခရစ်တော်က အသင်းတော်များတွင် အေးတိအေးစက်နိူင်လွန်းသည့် မေတ္တာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိူင် သည်အကြောင်းကို ကြိုတင်ဟောကြားခဲ့သည်။ အသင်းတော်များစွာတို့သည် တနင်္ဂနွေညဝတ် ပြုခြင်းကို ပိတ်ထားကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ စစ်မှန်သောမိဿဟာရနှင့် မေတ္တာတရားသည် ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးသောအရာများသာဖြစ်ပါသည်။ အသင်းသူအသင်းသားများသည် ကနဦး အသင်းတော်တွင်ရှိခဲ့ကြသကဲ့သို့ အတူတကွရှိမနေနိူင်ကြတော့ပါ။ (တမန် ၂း ၄၆- ၄၇ ) ယေ ရှုကလည်း နောက်ဆုံးသောကာလတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းခြင်းကင်းမဲ့မည်အကြောင်း ကြိုတင်ဟောပြောခဲ့သည်။ (လုကာ ၁၈း ၁- ၈ ) ယနေ့ကာလတွင် ဆုတောင်းအစည်းအဝေးမ ရှိသလောက်ဖြစ်သည်မှာလည်း အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးညအစီအစဉ် (တစ်ခုရှိလျှင်) ကို ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မှာ တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း အစီအစဉ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဤသည်မှာလည်း နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၏နိမိတ်ဖြစ် သည်မှာ သေချာနေသည်။ "လူသားသည်ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်ခြင်း [စဉ်ဆက်မပြတ်ဆု တောင်းသည့်ယုံကြည်ခြင်း] ကို မြေကြီးပေါ်မှာ တွေ့မည်လော။" (လုကာ ၁၈း ၈) သို့သော် ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကို သတိရပါ။
" ထိုအမှုအရာတို့သည် ဖြစ်စရှိသောအခါ၊ သင်တို့ကို ရွေးနှုတ်သော အချိန်ကာလရောက်လုနီးသည်ကို ထောက်သဖြင့်၊ မြော်ကြည့်၍ ခေါင်းကိုကြွကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ "( လုကာ ၂၁း ၂၈ ) )
ဓမ္မသီချင်းနံပါတ် ၃၊ အပိုဒ် နှစ်ကို သီဆိုကြပါစို့။
မှောင်မိုက်ညအချိန်၊ အပြစ်သည် လွှမ်းခြုံလျက်ထား၊
တန်ခိုးတော်၊ ဘုန်းတော်ရောင်ခြည်ဖြင့် တဖန်ပြန်လာမူမည်။
(" တဖန်ပြန်လာမူမည် " Mabel Johnston Camp ၁၈၇၁-၁၉၃၇)
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာများ
" ထိုကာလ၌ လူတို့သည် သင်တို့ကို ညှင်းဆဲခြင်း၊ အသေသတ် ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ အပ်နှံကြလိမ့်မည်။ ငါ၏နာမကြောင့်လည်း ခပ် သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည် သင်တို့ကို မုန်းကြလိမ့်မည်။ ထိုကာလ၌ အများသောသူတို့သည် ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍၊ အချင်းချင်း တယောက်ကိုတယောက် အပ်ကြလိမ့်မည်။ " ( (မဿဲ ၂၄း ၉- ၁၀) )
" လူအပေါင်းတို့သည်လည်း ငါ၏နာမကြောင့် သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့် မည်။ အကြင်သူသည် အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏။ ထိုသူ သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ " ( မာကု ၁၃း ၁၃ ) )
ကြောက်မက်ဖွယ်ရာညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းများသည် ကမ္ဘာကြီး၏များစွာသောနေရာ တွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ www.persecution.com ကို ဖတ်ရှုရန် ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များအပေါ်ဖိအားတွေတိုးလာခြင်းကို အနောက်တိုင်းကမ္ဘာတွင်းလည်း တွေ့လာရပါသည်။ သစ္စာရှိသောသင်းအုပ်များကို အသင်းတော်အား ကွဲပြားစေသောသူများ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရကြသည်။ မိဘများသည် ၄င်းတို့၏သားသမီးများအား ခရစ်ယာန်များဖြစ် လာခြင်းကြောင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြသည်။ အချို့သောသူများက ခရစ်ယာန်များကိုအလေးအ နက်ထားသည့် အသက်ကြီးရွယ်အိုမိဘများအပေါ်လုပ်ဆောင်ထားသောအရာကို ကြည့်ရ သည်မှာ ရင်နာစရာပင် ကောင်းလှပါသည်။ အချို့တို့ကို အိမ်တွင်သော့ခတ်ပြီး တစ်ဦးတည်း ချုပ်ထားကြသည်။ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သော သားသမီးများသည် သူတို့ထံသို့ လုံးဝ အလယ်အ ပတ်မသွားကြပေ။ သင်းအုပ်ဆရာများစွာတို့က အမေရိကန်ပြည်တွင်ရှိသောခရစ်ယာန်များ သည် ကြီးမားသည့်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ခံလာနိူင်ကြကြောင်း ၄င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်ကို ပြော ကြသည်။ သို့သော် ယေရှု၏မိန့်တော်မူချက်ကို ကြည့်ကြပါစို့။
" ပယ်ရှားနှင်ထုတ်၍ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ အသရေရှုတ်ချခြင်းကို ပြုသောအ ခါ သင်တို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ထိုကာလ၌ ၀မ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ လော့။ ရွှင်မြူးသောစိတ်နှင့်ခုန်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ သင်တို့၏အကျိုးသည် ကြီးလှပေ၏။ သူတို့၏ ဘိုးဘေးများသည် ပရောဖက်တို့ကို ထိုသို့ပင်ပြုကြပြီ။ " ( (လုကာ ၆း ၂၂- ၂၃ ) )
ကျွနု်ပ်သည် သိပ်လွန်လွန်းအားကြီးသည်ဟု ထင်မိလျှင် Franklin Graham အကြောင်း ဖောက်သတင်းစာဖော်ပြထားချက်ကို နားထောင်ကြပါစို့။ Franklin Graham သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလျက်ရှိသော Billy Graham ၏ သားပင်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သတင်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။
ဧဝံဂေလိဆရာ Franklin Graham က ပြင်းထန်စွာဝေဖန်သည်။
ဖောက်သတင်းစာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၅
ဧဝံဂေလိဆရာ Franklin Graham က အင်္ဂါနေ့တွင် သူသည် "အကျိုးမဲ့သုံးဖြုန်းခြင်း" ဟုခေါ်ဆိုနိူင်သည့် စီမံကိန်းချထားသော မိဘဘဝဖြစ်ခြင်းထောက်ပ့ံမှုကို နာဇီအာရုံစူးစိုက်နိူင်စွမ်းရှိသော နေရာတစ်ခုကဲ့သို့ လွန်ခဲ့သောအပတ်က ငွေကြေးများကို ဂျီအိုပီ ဦးဆောင်အသုံးပြုသည့်ငွေကြေးအပေါ် လီပါဗရီကန်ပါတီမှ ထွက် ခွါကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
လီဗာပလီကန်နှင့်ဒီမိုကရက်တစ်တို့သည် လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က ငွေကြေးဖြုန်းတီး တို့အတွက် ရှက်ဖွယ်ကောင်းသည်။သူက "အစီအစဉ်ချမှတ်ထားသောမိဘဘဝ" ငွေကြေးထောက်ပံ့နေခြင်း ရပ်ဆိုင်းရမည်။
နိူင်ငံရေးပါတီနှစ်ခုစလုံးကို အရင်ကဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ဂရေဟမ်က သူ၏ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် သူ၏အချည်းအနှီးဖြစ်ခြင်းကို စီးဆင်းစေသည်။
"စီစဉ်ထားသည့်မိဘဘဝကို မြင်ရကြားရခြင်းက လူသားဘဝနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသည့်အရာဖြင့် သန္ဓေသားဖျက်ချခြင်းမှ ကလေးများ ကိုရောင်းချသည့်အပို်င်းအကြောင်းကို ပြောဆိုခြင်းသည် ဒေါက် တာ Joseph Mengele နှင့်နာဇီသမာတိရုံး၏ဆင်တူယိုးမှားဖြစ် သည်" ဟု ရေးသားထားသည်။ "ထိုအရာသည် ၄င်းတို့ထောက် ပံ့ နေသောအရာအတွက် ဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပြန်ပိတ်ရန်လိုအပ်သောအ ရာများဖြစ်သင့်ပါသည်။၁.၁ ထရီယန်ဘတ်ဂျက်ဖြင့် စာမျက်နှာ ၂၀၀၀ အစီအစဉ်တကျလုပ်ဆောင်ရန် မဖြစ်နိူင်ပါ။"
ဂျီအိုဖီ အိမ်ဖြူတော်ကို အထောက်ပံ့ပေးသော ဂရေဟမ်က တော် နယ်ထရမ်ကို မျှော်လင့်ထားခဲ့ပြီး ယူအက်မှ မွတ်စလင်များကို တားမြစ်ရန် အငြင်းပွါးဖွယ်ရာသူ၏ခေါ်ဆိုမှုကို နှစ်မြှုပ်ခဲ့ဟူသော အရာက နိူင်ငံရေးပုံစံက သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ပျောက်ဆုံးစေ သည်ဟုဆိုသည်။
" ကျွနု်ပ်သည် လီပါဗလီကန်ပါတီ၊ ဒီမိုကရကတ်စပါတီ သို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည်ပါတီထံက အမေရိကန်အတွက် အကောင်းဆုံးလုပ် ဆောင်ပေးနိူင်သည့်အရာကို မျှော်လင့်မထားပါ “ ဟု ရေးသားထား သည်။
အိုး။ ဧဝံဂေလိဆရာတစ်ပါး၏ ဖော်ပြချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မသီချင်း ၃၊ ဒုတိယပိုဒ်ကို တဖန်သီဆိုကြပါစို့။
၃။ တတိယအချက်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သည့် နိမိတ်
ဤခွန်အားပေးသည့် နိမိတ်သည် ဤကြောက်မက်ဖွယ်နိမိတ်များကြားတွင် မည်ကဲ့သို့ နည်းဗျူဟာတကျ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို သိမှတ်ပါ။
" ထိုကာလ၌ လူတို့သည် သင်တို့ကို ညှင်းဆဲခြင်း၊ အသေသတ်ခြင်း ကိုခံစေခြင်းငှါ အပ်နှံကြလိမ့်မည်။ ငါ၏နာမကြောင့်လည်း ခပ် သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည် သင်တို့ကို မုန်းကြလိမ့်မည်။ ထိုကာလ၌ အများသောသူတို့သည် ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍၊ အချင်းချင်း တယောက်ကိုတယောက် အပ်ကြလိမ့်မည်။ အချင်းချင်းမုန်းကြ လိမ့်မည်။ မိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည် ပေါ်လာ၍ လူအများတို့ ကို လှည့်ဖြားကြလိမ့်မည်။ မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသ ဖြင့် အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏။ ထိုသူသည် ကယ်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် သက်သေ ဖြစ်မည်အကြောင်း နိူင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို လောကီနိူင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတို့၌ ဟောရလိမ့်မည်။ သို့ပြီးမှ အ ဆုံးသည် ရောက်လတံ့။ " ( (မဿဲ ၂၄း ၉- ၁၄ ) )
"နိူင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားသည်" မာကု ၁၃း ၁၀ တွင်ဖော်ပြထားသည့် "ဧဝံဂေ လိတရား" ဖြစ်တော်မူပြီး၊ "ဧဝံဂေလိတရားကို ရှေးဦးစွာ လူမျိုးအပေါင်းတို့အား ဟောရလိမ့် မည်" ဟုဆိုသည်။ မှားယွင်းသောအယူဝါဒနှင့်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကြားတွင် နိူင်ငံတော်နှင့် ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကို လောကီနိူင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတို့၌ ဟောရလိမ့်မည်။ "သို့ပြီးမှ အဆုံးသည် ဖြစ်လတ့ံ " ဟု ခရစ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ( မဿဲ ၂၄း ၁၄ )
ပရောဖက်ပြုချက်ဟူသည်ကား အဘယ်နည်း။ ယနေ့တွင် ဧဝံဂေလိတရားကို မသိမ ကြားရသေးသောနေရာဒေသသည် မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီး အင်တာနက်အားဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ရေဒီယိုအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ လှိုင်းတိုအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ တီဗီစလောင်းအား ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သာသနာပြုများအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယနေ့ကာလတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ကျဲ့ဖြန့်နေကြသည်။ မဿဲ ၂၄း ၁၁-၁၄ သည် ကျွနု်ပ်တို့၏နေ့ရက်ကာလ တွင် ပြည့်စုံလျက်ရှိပြီ။ အဘယ်မျှလောက် အံ့ဘွယ်ကောင်းပါသနည်း။ အနောက်တိုင်းတွင်ရှိ သောအသင်းတော်များပင်လျှင် ၄င်းတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအစည်းအဝေးကို ပိတ်ပြီး ညနေပိုင်း ၀တ်ပြုအစည်းအဝေးကိုလည်း ရပ်တန့်ကြပါပြီ။ တတိယကမ္ဘာများဖြစ်ကြသော တရုုတ်၊ အရှေ့ တောင်အာရှ၊ အာဖရိကတိုက်ရှိအချို့နိူင်ငံများ၊ ဟုမ်းလူမျိုးများကြား၊ နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ လက် လှမ်းမမှီသောနေရာများတွင်သာ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားဖို့လိုအပ်သည်။ မှားယွင်းသောသြ ၀ါဒနှင့် နိူးထမှုတို့သည် ယေရှုက ကြိုတင်ဟောကြားခဲ့သည်အတိုင်း တချိန်တည်းတွင် ဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိသည်။ ထူးဆန်းသည့် ၀ိရောဓိတရားပါတကား။ သို့သော် ထိုအရာများသည် ခရစ် တော်က ဖြစ်ပျက်လာမည်ဟု ကြိုတင်ဟောပြောခဲ့သည်အတိုင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေ သည့်အရာများသာဖြစ်ကြပါ သည်။
" အချင်းချင်းမုန်းကြလိမ့်မည်။ မိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည်။ ပေါ် လာ၍ လူအများတို့ကို လှည့်ဖြားကြလိမ့်မည်။ မတရားသောအမှု တို့သည် များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည် ၏။ ထိုသူသည် ကယ်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ လူမျိုးအပေါင်းတို့ သည် သက်သေဖြစ်မည်အကြောင်း နိူင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံ ဂေလိတရားကို လောကီနိူင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတို့၌ ဟောရလိမ့် မည်။ သို့ပြီးမှ အ ဆုံးသည် ရောက်လတံ့။ " ( (မဿဲ ၂၄း ၁၁- ၁၄ ) )
ဟာလေလုယ၊ သခင်ယေရှုကြွလာတော်မူပါ၊ တေးသီချင်းကို ပြန်၍ ကျူးဧကြပါစို့။
ခရစ်တော်ကို အမှန်တကယ် သိပါရဲ့လား။ သူပြန်လာသည့်အချိန်တွင် အဆင့်သင့်ဖြစ် ပါရဲ့လား။ သင်သည် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ပါရဲ့လား။ ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ်နေလျှင် "အဖန်ဖန်ပြန်လည်ဆက်ကပ်ခြင်း" သည် သင့်အား အကူအညီပေးမည်မဟုတ်။ အချို့တို့က ပျောက်သောသားကဲ့သို့ပင် ခရစ်တော်ထံပါးသို့ ပြန်လာကြသည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် သမ္မာကျမ်းစာက ပျောက်သောသားသည် တချိန်က ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီး ပြန်လည်လဲ ကျသွားသည်၊ ထို့နောက် သူ၏အသက်တာကို ပြန်လည်ဆက်ကပ်သည်ဟု လုံးဝလုံးဝဆိုမ ထားပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက သူသည် ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြ ထားသည်။ သူ၏ဖခင်က ထိုသို့သာပြောဆိုသည်။
" ငါ့သားသည် အထက်ကသေ၏။ ယခုရှင်ပြန်၏။ အထက်က ပျောက်၏။ ယခု တွေ့ပြန်၏ ဟုဆို၏။ "( (လုကာ ၁၅း ၂၅ ) )
သင်သည် ပျောက်ဆုံးသည်ဟု ကိုယ်ကိုသိမှတ်လျက် ခရစ်တော်ထံသို့ လာရပါမည်။ မိမိကိုယ် ကိုပျောက်သည်ဟု မသိနားမလည်သောသူသည် ယေရှုထံသို့ရောက်လာမည်မဟုတ်။ သူတစ် ပါးတည်းကို ကိုးစားယုံကြည်မည်မဟုတ်။ ပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်း လက်တွေ့အသက်တာတွင် ထိတွေ့ခံစားရမည်မဟုတ်။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းကို ခံ စားရမည်မဟုတ်၊ သို့မဟုတ် ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းကို လည်း ခံရလိမ့်မည်မဟုတ်။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်မှီ ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ် ကြောင်းကို သိရှိ ရမည်။
အိုဘုရားသခင်၊ ကျွနု်ပ်တို့တောင်းသောဆုမှာ ပျောက်ဆုံးသောသူများသည် ဤတရား ဒသနာကို ကြားနာခြင်း သို့မဟုတ် ဖတ်ရှုခြင်းကိုပြုသောအခါ မိမိတို့အပြစ်ကို သိနားလည်ပြီး သားတော်ယေရှုဘုရားကို ကိုးစားနိူင်ပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။ ဧဝံဂေလိဆ ရာကြီး George Whitefield (၁၇၁၄- ၁၇၇၀) ၏ "ကျေးဇူးတော်ခံစားနိူင်သည့်နည်းလမ်း" ကို ဖတ်ရှုရန် ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။
ဤတရားဒေသနာစာမူများသည်ဤတရားဒေသနာစာမူများကို ကူးယူ၍မရပါ။ သင်သည် Dr. Hymers ၏ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲအသုံးပြုနိူင်သည်။ သို့သော်
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မာကု ၁၃း ၁- ၁၃
"အားလုံးကိုအဆင့်သင့်ဖြစ်စေလိုသည်"၊ (Larry Norman ၁၉၄၇-၂၀၀၈) ရေးစပ်သည်။
" ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်မှထွက်ကြွတော်မူသည်ရှိသော်၊ တပည့်တော် တို့သည် ဗိမာန်တော်၏တိုက်ဆောင်များကိုပြခြင်းငှါ အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ ယေရှုကလည်း၊ ဤအရာအလုံးစုံကို သင်တို့သည် မြင်ကြသည်မဟုတ်လော။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ မဖြိုမချဘဲကျောက် တစ်ခုပေါ်မှာ တခုမျှမတည်မနေရဟု မိန့်တေ်ာမူ၏။ ထို့နောက် သံလွင် တောင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူစဉ်၊ တပည့်တော်တို့သည် အခြားသူမပါဘဲ၊ ချဉ်းကပ်၍၊ ထိုအမှုအရာတို့သည် အဘယ်ကာလမှဖြစ်မည်ကို၄င်း၊ ကိုယ်တော်သည်ကြွလာ၍ ဤကပ်ကမ္ဘာကုန်သောပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်ကို၄င်း အမိန့်ရှိတော်မူပါဟု လျှောက်ကြ၏။ " ( (မဿဲ ၂၄း ၁- ၃ ) )
( လုကာ ၂၁း ၂၄၊ မာကု ၁၃း ၃၂၊ ၃၃၊ မဿဲ ၂၄း ၁၄၊ ၃၇)
မဿဲ ၂၄း ၄- ၅၊ ၂ကော ၁၁း ၄၊ ၁တိ ၄း၁၊ ၁ယော ၄း ၃၊ လုကာ ၂၄း ၃၉၊
ဟေဗြဲ ၁၃း ၈၊ ၁တိ ၄း ၁၊ မဿဲ ၂၄း ၂၄၊ ၂တိ ၄း ၃- ၄၊ ၂ သက် ၂း ၃၊ မဿဲ ၂၄း ၁၂၊ တမန် ၂း ၄၆- ၄၇၊ လုကာ ၁၈း ၁- ၈၊ ၂၁း ၂၈။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာများ၊ မဿဲ ၂၄း ၉-၁၀၊ မာကု ၁၃း ၁၃၊ လုကာ ၆း ၂၂- ၂၃ ။
၃။ တတိယအချက်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သည့် နိမိတ် မဿဲ ၂၄း ၉- ၁၄၊ မာကု ၁၃း ၁၀၊ လုကာ ၁၅း ၂၄။